Zoin စျေး - အွန်လိုင်း ZOI ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Zoin (ZOI)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Zoin (ZOI) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Zoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $831 315.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Zoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Zoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
ZoinZOI သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.153ZoinZOI သို့ ယူရိုEUR€0.129ZoinZOI သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.117ZoinZOI သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.139ZoinZOI သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr1.36ZoinZOI သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.963ZoinZOI သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč3.38ZoinZOI သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.568ZoinZOI သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.202ZoinZOI သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.214ZoinZOI သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$3.39ZoinZOI သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$1.18ZoinZOI သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.82ZoinZOI သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹11.42ZoinZOI သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.25.78ZoinZOI သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.21ZoinZOI သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.234ZoinZOI သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿4.75ZoinZOI သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥1.06ZoinZOI သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥16.31ZoinZOI သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩180.91ZoinZOI သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦59.16ZoinZOI သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽11.14ZoinZOI သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴4.2
ZoinZOI သို့ BitcoinBTC0.00001 ZoinZOI သို့ EthereumETH0.000398 ZoinZOI သို့ LitecoinLTC0.00281 ZoinZOI သို့ DigitalCashDASH0.00168 ZoinZOI သို့ MoneroXMR0.00171 ZoinZOI သို့ NxtNXT11.91 ZoinZOI သို့ Ethereum ClassicETC0.0225 ZoinZOI သို့ DogecoinDOGE44.07 ZoinZOI သို့ ZCashZEC0.00185 ZoinZOI သို့ BitsharesBTS4.7 ZoinZOI သို့ DigiByteDGB4.89 ZoinZOI သို့ RippleXRP0.542 ZoinZOI သို့ BitcoinDarkBTCD0.00526 ZoinZOI သို့ PeerCoinPPC0.507 ZoinZOI သို့ CraigsCoinCRAIG69.58 ZoinZOI သို့ BitstakeXBS6.51 ZoinZOI သို့ PayCoinXPY2.67 ZoinZOI သို့ ProsperCoinPRC19.16 ZoinZOI သို့ YbCoinYBC0.00008 ZoinZOI သို့ DarkKushDANK49.01 ZoinZOI သို့ GiveCoinGIVE330.77 ZoinZOI သို့ KoboCoinKOBO34.79 ZoinZOI သို့ DarkTokenDT0.141 ZoinZOI သို့ CETUS CoinCETI441.09